Ukuba umzimba wakho kunzima ukugaya i-gluten, akuthethi ukuba ngoku awukwazi ukutya izitya ezimnandi. Into ephambili kukufumana enye indlela. Ubuhlungu kumalungu, i-colic esiswini emva kokutya, ukubunjwa kwegesi, ukufumana ubunzima, ukudinwa yizona zibonakaliso zokugula kwe-glutein kunye nokunyanzelana kwe-gluten-ukungakwazi ukugaya iprotheni efunyenwe ngqolowa nakwezinye izityalo. Kwaye sonke ngezinye iinkhathi sizibuze: Yintoni enokuyenza ngokunyamezelana kwe-gluten ngomzimba?
I-Veronika Protasova, oneminyaka engama-38 ubudala, intatheli yaseSt. Petersburg, wahlushwa iintloko kunye nentlungu yesisu iminyaka emininzi ngaphambi kokuba afunde ngokuchanekileyo ukugula kwakhe. Uthi: "Ndaqalisa ukulamba, kuba yonke isidlo sasibangela ukuba ndibe nosizi olukhulu." Ndavavanywa ixesha elide, kwaye xa isilonda esiswini, amatye eesilwane kunye nesilonda se-duodenal sasingabandakanywa, ugqirha waphetha ukuba umathumbu wam iyakwazi ukucaphukisa kwaye iyancoma imveliso yokutya ebonwa njengokukhanya. "
Ngokomzekelo, i-pasta , kodwa yandisa nje intlungu. Emva kokuba uthetha nomhlobo kwaye uthetha ngesifo se gluten, udade wakhe wayenokhathaza. UVerica wandibuza ukuba ndixelele igama logqirha ophethe udade wakhe. Emva koko, emva kokudlula iimvavanyo, kwacaca ukuba imbangela yokukhathazeka kwakhe yayigula-glutein - ubunzima bokugaya i-gluten.
Kulabo bafumana isifo se-celiac esiyintsimi, ukutya okunokutya kwe-gluten kubonakalisa intlungu encinci. Oku kukhokelela ekunqongopheni kwezondlo ezithile kunye nezinye izifo. Nangona kunjalo, kukho imeko xa umzimba unzima ukugaya i-gluten, kukho yonke imiqondiso yesifo se-celiac, kodwa iimvavanyo aziqinisekisi. Kule meko, kusacetyiswa ukuba ungadli iimveliso zokutya ukusuka kwii-grains ezine-gluten.
Ekuqaleni, kunokubonakala ngathi ukutya okunjalo akunakwenzeka ukugcina: i-gluten nayo iqulethwe ekutya njengokutya okutya, irayisi, i-rice, kunye nezinye iimveliso eziye zithathwa njengempilo. Nokuba isitashi sokutya asenziwe kuphela kwiitatayi, kodwa ngezinye iinkqubo zenziwa ngqolowa.
Emva kokudliwa kweVeronica, wabhala inqaku elifutshane kwaye waliposela kwiblogi yakhe. "Ndifuna iimveliso ezintsha, njenge-adventure." Ndivakalelwa njengomzingeli wezinto ezilungileyo. " "Musa ukukhathazeka ukuba xa ufunda ngokugula kwakho kwaye ufumana iingcebiso kumgqirha wakho malunga nesondlo, kuya kubonakala kunzima kakhulu. Ngokuhamba kwesikhathi, uza kufumana iimveliso ezintsha kunye nezinto ezinomdla ongazisebenzisa kwaye awukho kwezinye iimeko yayiza kuthobela ingqalelo.
Abantu abayi-1 kwabangama-133 babulala ngesifo esibangeliso okanye ukunyamezelana kwe-gluten, nangona abantu bebaninzi abakwaziyo malunga nokuxilongwa kwabo. Esi sifo kunzima ukuchonga, kuba iimpawu zayo - ukukhathala, ukukhathala, iintloko, ukukhwabanisa kwesikhumba iimpawu ezininzi ezininzi izifo. Kukholelwa ukuba abafazi bafumana izifo ezinobungqingili ngokuphindaphindiweyo kunamadoda. Nangona kunjalo, olu lwazi alukwazi ukulungiswa, kuba abafazi bavakashela oogqirha ngokuphindaphindiweyo, yingakho banesifo esiningi. Abantu abanesifo esiqhekezayo ngezinye iinkathazo banesifo sohudo kunye nokuphelelwa amandla, kwaye ngamanye amaxesha ukusuka ekuqotheni, ukulahleka kwesisindo kunye nokubetha. Emva kokuba baqede i-gluten ekudleni kwabo, baqhelanisa ubunzima babo, kwaye zonke iimpawu zesifo ziyabonakala.
Ucwaningo luye lubonisa ukudibanisa isifo se-glutenic neentsholongwane ze-endocrine, kubandakanywa nesifo sikashukela se-Ixlin kunye neengxaki ze-thyroid ezingaqhelekanga, ezifana nesifo se-Graves. Kwaye kwavela ukuba i-gluten ingabangela ukukhathazeka okukhulu kweemoto kubantu abanezifo ezinqabileyo. Kwaye kubantu abaninzi kubaluleke kakhulu ukwazi ukuba benzeni ukuba unokunyanzeliswa ngokugqithiseleyo ngumzimba.
Ngoko ke, ezininzi iingcali zicebisa wonke umntu ukuba ahlole ukufumaneka kwezifo eziqhenqileyo. Ukuba ubuncinci banokukrokrelwa ukuba ungomnye walabo bahlukunyezwa yi-glutein, ngaphandle kokulibaziseka, tyelela i-gastroenterologist. Uvavanyo lwegazi luyakwazi ukulufumana lula olu gulane kwaye wena, ngokutshintshisa ukutya kwakho, kuya kuphucula kakhulu umgangatho wobomi bakho.
Indlela yokunyamekela i-mushroom yeeyi
Yintoni engcono ukunika indoda?
Ukusebenzisa kakuhle amandla akho nokuphumla
Iimpawu zobomvu obumileyo
Indlela yokugcina kuyo yonke into
Kungcono njani ukuhlela imisebenzi yasekhaya?
IHoroscope: Unyaka we-Tiger ngenkunzi yegusha
Sitshiza amazinyo: njani kunye nento enokuyenza?
Inkukhu kunye ne-eggplant
Ukuqeqeshwa komdlali we-actress u-Olga Lomonosova: "Isifundo kumgangatho" ngesibalo esincinane emva kokubeleka
I-ayisikrimu ilungile okanye imbi? Indlela yokwenza i-ice cream ekhaya
Isidlo sePro protiniv: Yintoni ongayidlayo?
Imicu yegolide ekutyunjeni kweplastiki
Indlela yokukhetha i-shrimp efanelekileyo. Zabo zakhiwo
Indlela yokugcina umntu-iLibra
Yintoni enokuyenza xa ulusu lutyhula ezandleni
Indlela yokukrazula umzila we-acne
Jam kusuka ku-antonovki